စာအုပ်စင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 35
SAFFRON REVOLUTIONနွေနှောင်းဝ သ န် ရဲ့မှာတ မ်းရှ ည် အောင်ဝေး၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၂ (စာအုပ်အမှာစာ) တံတားအောက်မှာ မြစ်ရေတွေ စီးဆင်းသွားခဲ့ကြပြီ။ ညတုန်းက ဟိုးအဝေးကြီး ဥရောပမှာနေတဲ့ “ရဲရင့်သက်ဇွဲ“က၊ အစ်ကိုရေ…ကျနော့်ကဗျာစာအုပ်အတွက် အမှာစာလုပ်ပါဦး ဆိုပြီး၊ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ လှမ်းသတိပေးသည်။ မစ်ရှီဂန်ညက၊ အေးအေးနွေးနွေးကလေး နက်လာနေသည်။ အိမ်အပြင်မှာ လေညင်းတိုးနေသလား။ ကျနော် မှန်ပြတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့၊ သစ်ပင်မှောင်မှောင်တွေ မိုးတိုးမတ်တတ်။ သစ်ရွက်တွေ နားရွက်မခတ်။ ဟော…သိပ်တောင်မကြာလိုက်။...
မောင်စွမ်းရည်၏ မိုးမခဆောင်းပါးများ (၁) ထွက်မည်၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ စာအုပ်အညွှန်း၊ ရေးသူ မောင်ရစ်၊ စက်တင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၂ “မိုးမခက ဆရာစွမ်းသို့” အမှာစာကို ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမောင်စွမ်းရည်နဲ့ ဆရာဦးတင်မိုးတို့က လူငယ်တွေ၊ မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ်မှာ အလွန်စေတနာ မေတ္တာထားပါတယ်။ မိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာ စလုပ်တော့ ဘားမားတူဒေးစာမျက်နှာနဲ့ မရှေးမနှောင်းဆိုကြပါစုို့ရယ်။ ၂၀၀၃ လောက်တုန်းကပေါ့။ ဆရာတွေက စာမူတွေပေး၊ စာတွေညွှန်း၊ ပြောလိုက်၊ ဆိုလိုက်၊ ဆူလိုက် ဆဲလိုက်နဲ့။ သူတို့နံမယ်တွေကို ထည့်၊ သူတုို့နံမယ်တွေကို သုံး၊ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့။ ပရိသတ်ထူထူမှာ သူတို့မိတ်ဆွေ လူငယ်ကလေးတွေရဲ့ အင်တာနက်တွေ၊ စာစောင်တွေ ဘာတွေအကြောင်း ချီးမွန်းခန်း ဖွင့်ပြီး ကောင်းသတင်းဖြန့်ပေးပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အင်တာနက်တွေ အီးမေးတွေမှာ ဘယ်လိုကြည့်ရတယ်၊...
ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၂ သမိုင်းမှတ်တမ်းလည်း ၀င်စေ …။ နောင်တော့် နောင်တော်ကဗျာဆရာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သား၊ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသူများရဲ့ သက်စွန့်ဆံဖျား ရေးသားသွားခဲ့တာတွေကိုလည်း နှောင်းလူ (မျိုးဆက်သစ်) တို့ သတိထား ဂုဏ်ပြုနိုင်ကြရန် ရည်ရွယ်ရင်း … လေးစားစွာဖြင့် ခင်လွန်း ဥဒါန်းမကြေ စာစောင်အား ဖတ်ရှုရန် No tags for this post.
မိုးမခ၏ ပင်တိုင်စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင်၏ အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်ထွက်မည် မိုးမခ၊ ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၂ လာမည့် ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် စာရေးဆရာသန်းဝင်းလှိုင်က ၎င်း၏ ဆောင်းပါးများ စုစည်းထားသည့် အာဇာနည်နေ့ သို့မဟုတ် မြန်မာ့သမိုင်းတွင်မမေ့အပ်သော နေ့တနေ့ စာအုပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမည် ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကို ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပါမည်။ No tags for this post.
ကျွန်းတိုက်ပွဲနှစ်(၄၀) ပြည့်အထိမ်းအမှတ် စာရေးသူ – တောင်ပေါ်သား ကျွန်းပြန် (၂၄-၁-၂၀၁၁)/ စာမျက်နှာ – ၆၂ မျိုးမြင့်မောင်၊ မိုးမခစာအုပ်အညွှန်း ၊ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၂ ဤစာအုပ်ကို များမကြာမီကမှ ကျွန်တော်ဖတ်ရှုခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “ကိုးကိုးကျွန်းနှင့် သူရဲကောင်းအာဇာနည် (၈) ဦး ” ဟူသောခေါင်းစဉ်နှင့် “တောင်ပေါ် သား ကျွန်းပြန် ”ဟူသည့် အမည်ကပင် ကျွန်တော့်အတွက် ထူးခြားနေပါသည်။ “ဓါးတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်” (မြသန်းတင့်) စာအုပ်ကို ကျွန်တော် သတ္တမတန်းကျောင်းသားဘဝမှာ စပြီး ဖတ်ဖူးတာပါ။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ထိုစဉ်က စွန့်စားခန်းဝတ္တုတစ်ပုဒ်လို ဖတ်ခဲ့ပြီး၊ စွန့်စားခန်းဝတ္တုတစ်ပုဒ်အဖြစ် နှစ်သက်စွဲလန်းမိခဲ့ပါ သည်။ သတ္တမတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့နှစ်သက်စွဲလန်းမှုမျိုးနဲ့ နှစ်သက်စွဲလန်းခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ထိုဝတ္တုထဲက...
အင်န်အယ်ဒီ၏ ဒီဝေ့ဗ်ဂျာနယ် အွန်လိုင်းပေါ်ရောက် မိုးမခစာအုပ်စင်အညွှန်း၊ ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၂ http://dwave.nld.name/ အထက်ပါလိပ်စာမှာ အင်န်အယ်ဒီပါတီက ပြည်တွင်းမှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ ဒီဝေ့ဗ်ပါတီပြန်ကြားရေး ဂျာနယ်ကို အီးဘွတ်အဖြစ် ဒေါင်းလုပ်ရယူ ဖတ်နိုင်တယ်။ အလှူလည်း ခံတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ No tags for this post.